Bahrain: Nahoana Ny Biraon’i Al Jazeera No Nakatona? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2017 12:21 GMT
Nambaran'i Bahrain fa vonjimaika no nanakatonana ny biraon'ny Fantsona Al Jazeera Mandeha amin'ny Zanabolana noho ny “fanitsakitsahana ireo fifanarahana arak'asa”. Mihetsika amin'ny fampiroboroboana ity lahatsoratra ity ireo mpitoraka bilaogy sy mpibitsika – indrindra fa taorian'ny tsaho niely fa nakatona ny foibe any Katàra noho ny tatitra navoakany momba ny fahantrana ao Bahrain. Mandritra izany fotoana izany, milaza ny Al Jazeera fa tsy mbola nampiasa akory ny birao tao Bahrain fa inona no tena zava-nisy marina?
Izao no valintenin'ny Bahraini SuadAK ho an'ny fanontaniako momba ny fanakatonana ny birao tsy nisy akory an'ilay fantsona:
Ary manontany tena aho ny amin'izay hiseho aorian'ny bitsik'i SudAK izay nitakiana amin'ny Al Jazeera mba hangataka ” alàlana” isaky ny te-handefa zavatra momba an'i Bahrain izy.
@SuadAK Ary aiza izy io vao hifarana ? Hitaky fangatahana amin'ny Guardian, New York Times ary Washington Post ihany koa izany ry zareo ?
Mandritra izany fotoana izany, ny BahrainRights, kaontin'ny Ivontoerana Mpiaro ny Zon'olombelona any Bahrain dia mibitsika ny rohin'ireo lahatsarin'ilay tatitra izay lazaina fa nitarika ny fampiatoana ny asan'ny Al Jazeera any Bahrain. Mibitsika ihany koa ilay ivontoerana, izay vao nakataon'ny manampahefana Bahrainita :
Tatitry ny AlJazeera TV momba ny fahantrana ao Bahrain izay antony nahatonga ny fanakatonana ny biraony tany #Bahrain, FIZARANA 1
Ary inty ny tapany faharoa :
FIZARANA 2-n'ny tatitry ny AlJazeera TV momba ny fahantrana tany Bahrain izay antony nanakatonana ny biraony tany #Bahrain fizaràna 2